लेख /रचना - Sano Aawaj
१४ कार्तिक २०७८, आईतवार१४ कार्तिक २०७८, आईतवार१४ कार्तिक २०७८, आईतवार by sanoaawaj1 Comment
मनिषा आफ्नो कक्षा १० को पढाइ सक्काएर +२ को लागि सहर पसछिन् …
Breaking news 2, ट्रेन्डिङ, रोचक खबर, लेख /रचना, व्यक्तित्व
सहर बनाउने र बिगार्ने ठाउँ मनिषा +२ को लागि सहर पढ्छिन् र कलेज join गर्छिन् । उनी एकदमै मेहनती विद्यार्थी थिइन् , उनले दिन रात एक गराएर पढ्छिन् र उनले कक्षा ११ मा आफूले मेहेनत गरी हासिल गरेको उत्कृष्ट नतिजा ले शिक्षक र आफ्नो अविभावक दुवै लाई प्रशन्न पार्छिन्।सबै कुरा राम्ररी चलिरहन्छ, उनी कक्षा ११ को नतिजा राम्रो प्रकाशन भाए पछि कक्षा १२ मा भर्ना हुन्छिन् । उनी निकै स्वभावशाली थिइन्, उनले आफ्नो कुनै साथी सहर पसेर बनेको देखेकी थिइन् भने कुनै साथी सहर को हावा पानी ले बिग्रेको देखेकी थिइन्। उनले बुझिसकेकी थिइन् कि सहर बनाउने र बिगार्ने दुवै गर्ने ठाउँ हो। हुन त गाउँ मै हुर्किए पनि बाबा आमा दुवै जागीरे भएर होला उनलाई रोजेको खान, लगाउन र पैसाको कुनै कमी थिएन तर पनि उनलाई यो सब चीज को कुनै घमण्ड थिइन्। उनलाई बस् आफ्नो बाबा आमाको सपना पुरा गर्नु थ...
४ कार्तिक २०७८, बिहीबार४ कार्तिक २०७८, बिहीबार४ कार्तिक २०७८, बिहीबार by sanoaawajNo Comments
पत्रकार पमोदको संघर्षको कथा जुठो भाँडामाझ्ने देखि पत्रकारसम्म..
Breaking news 1, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट, रोचक खबर, लेख /रचना, व्यक्तित्व
“भनिन्छ राम्रो काममा हात हाल्ने को खुट्टा तान्नेहरू धेरै हुन्छन्”विसं २०५८ फागुन १४ गते गतेका दिन बुबा रामकुमार गिरी र आमा बिमला गिरी को कोख बाट सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सागाँचोक गढि.ना.पा-१३ मा यो धर्तीमा पाइला टेकेका थिए । सामान्य परिवारमा जन्मिएका प्रमोद गिरी आफ्ना घरका जेठा सन्तान हुन। सामान्य घरपरिवार मा जन्म लिएका प्रमोद गिरी सामान्य रूपमा नै आफ्नो जिन्दगी बितिरहेको बताउँछन् । प्रमोद गिरीका बुवाले बिदेश गएर आएर गाउँमै एउटा सनो पसल राखेर आफू सहित परिवार को दैनिक काम काज चलाउछन भने आमा घरमा प्रायः सधै बिरामी हुनुहुन्छ । हुन त हरेक मान्छे को चासो भविष्य को खोजी गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयत्न हुन्छ। तर सकारात्मक सोच अगाडि बढाउदा बढाउदै कारणबस यात्रा स्थगित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै अवस्था रहेको प्रमोद गिरीले बताउनुभयो । "०७२ सालमा आएको भुकम्पले घर भत्काई दि...
ने बि संघ लुम्बिनी प्रदेश सि टि ई भि सभापति द्वारा शुभकामना व्यक्त
ने बि संघ लुम्बिनी प्रदेश सि टि ई भि सभापति द्वारा शुभकामना व्यक्त ने बि संघ सि टि ई भि टी सभापति विशाल आचार्यले वडा दशैको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले सम्पुर्ण बुद्धिजीवी, समाजसेवी, राजनीति कर्मी , रास्ट्रसेवक कर्मचारी , सुरक्षाकर्मी , शिक्षकवर्ग , पत्रकारहरु , युवासाथीहरु , आमाबुबा दाजु भाइ तथा दिदिबहिनीहरुलाई वडादशै तिहार छ्ठको पावन अवसरमा सु-स्वास्थ दिर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्नु भएको छ!!! साथै यसै महानचार्डको अवसरमा यता पार्टीको १४ अधिवेशनमा वार्ड र नगर अधिवेशन बाट निर्वाचित वार्ड र नगर कार्य समितिका सम्पुर्ण पार्टी सहयोद्दाहरु , क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरु र निर्वाचनमा खटिने सबै काङ्ग्रेसजनहरु प्रति हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिदै आफू क्षेत्र नम्बर १ सचीव पदको उम्मेद्बार रहेकाले सहयोग गर्न अनुरोध गर्नु भएको छ।...
२३ आश्विन २०७८, शनिबार२३ आश्विन २०७८, शनिबार२३ आश्विन २०७८, शनिबार by sanoaawajNo Comments
Breaking news 1, Breaking news 2, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट, रोचक खबर, लेख /रचना, व्यक्तित्व
काठमाडौ / यो वर्षको तीजमा ‘चरी जेलैमा’ले यत्रतत्र, सर्वत्र चर्चा पायो । अहिले पनि त्यो गीत वजेको सुनिन्छ । यो गीतको चर्चा सेलाउन नपाउँदै अहिले उनको दशैं तिहार गीत सार्वजनिक भएको छ । बुधबारमात्रै सार्वजनिक गीतको बोल छ, ‘दशैं तिहार आइसक्यो’ । यस गीतले पुनः दर्शक/स्रोताको मन जितेको छ । सार्वजनिक भएको केही बेरमै गीतले तह’ल्का म’च्चाएको छ । सांगीतिक बजारमा फेरी केही दिन उनको गीतको बो’लवाला बढ्ने संगीतकर्मीहरूले अनुमान छ । यतिसम्मकी नयाँ गीत सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेका अन्य केही गायक/गायिकाहरू यो गीत आएपछि सार्वजनिक गर्नवाट पछि ह’टेका छन् । तीज गीत ‘चरी जेलैमा’पछि आफ्नै म्युजिक कम्पनी (सपना म्युजिक इन्डष्ट्रिज) मार्फत सार्वजनिक भएको गीत हो– ‘दशैं तिहार आइसक्यो’ । यस गीतमा पनि विष्णु माझीकै श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारीको शब्द र संगीत छ । विष्णु माझीको स्वर रहेको गीतमा महिमा आचा...
२० आश्विन २०७८, बुधबार२० आश्विन २०७८, बुधबार२० आश्विन २०७८, बुधबार by sanoaawajNo Comments
के ऋण काढेरै भए पनि वा समाजलाई देखाउनैको लागि भए पनि चाडवाड मनाउनै पर्छ र ?(प्रमोद गिरी)
breaking news 3, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट, लेख /रचना, व्यक्तित्व
शान्ति र सद्भावको सन्देश बोकेर आउने बडा दशैले सम्पुर्ण हिन्दु नेपालीहरुलाई साच्चिकै शान्तिको अनुभुति दिलाउने गर्दछ । हुन पनि हो, दशै जस्तो महान चाडमा हामीले हरेक दुःख कष्ट बिर्सेर सुख र शान्तिको सास फेर्ने गर्दछौँ । एक अर्कासँग खुसी साटासाट गर्ने र मान्यजनबाट टिका ग्रहण गरी दशै मनाउने परम्परा परापुर्व कालदेखि चलिआएको छ । आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात घटस्थापनाको दिनदेखि नवमी अर्थात नौ दिनसम्म दुर्गा भवानीको पुजा आराधना गरि दशौँको दिन मान्यजनबाट टिका र जमरा लगाई आशिर्वाद लिने पर्ब दशैं । दशैंलाई वडा दशैं, दशहरा, विजया दशमी, आयुध(पूजा आदि नामले पनि चिनिन्छ । वर्ष भरि विभिन्न कारणले जहाँ रहे पनि वर्षको एकपल्ट पारिवार तथा इष्टमित्रसंग भेट गराइदिने चाड पनी हो दशैं । खुसी र उमङ्गको चाड । न घाम न वर्षा, न धुलो न मैलो अनि चारैतिर रमाइलो र हरियाली हुने मौसम, किनमेल अनि खानपानको चाड दशैंक...
२३ भाद्र २०७८, बुधबार२३ भाद्र २०७८, बुधबार२३ भाद्र २०७८, बुधबार by sanoaawajNo Comments
म भित्रको जिन्दगी, हेर्नेको आँखामा जिन्दगी फूलजस्तो देखिन्छ तर देखिँदैन भित्री मनको काँडा
Breaking news 1, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट, लेख /रचना, व्यक्तित्व
एक तमासको छ मेरो मन पनि। किनकि आज धेरै समयपछि सम्झिने समय मिलेको छ सायद यो सपनाको सहरको हजारौंको भिडमा पनि एक्लै हुनु परेकाले होला ! जिन्दगी यसरी बितिरहेको छ कि फर्केर हेर्नका लागि कुनै अवसरको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । कुनै समय साँच्चै आनन्द लाग्दो थियो, जहाँ सबै आफ्ना थिए र आफूमा कुनै किसिमको समस्या हुनुभन्दा पहिला नै त्यसको समाधान खोजिदिने मानिसहरु थिए, सायद त्यति बेलाको समस्या पनि साना थिए होला, जुन जो कोहीले पनि समाधान गर्नसक्थ्यो ।आजको दिन सम्म आईपुग्दा आफ्ना मानिएका मानिसहरु सबै पराइ भएका छन्, त्यसैले हिजोका सुनौला पानाहरु अहिले फिका बन्न पुगेका छन । कसैले बेवास्ता गरिरहेको छ भन्ने पनि थाहा छ, कसैलाई म मन परिरहेको छैन भन्ने पनि थाहा छ, म आफ्नो बाटोबाट विचलित हुँदै छु भन्ने पनि थाहा छ र हिँड्नुपर्ने बाटो कुन हो भन्ने पनि थाहा छ । तर समस्य...
१२ भाद्र २०७८, शनिबार१२ भाद्र २०७८, शनिबार१२ भाद्र २०७८, शनिबार by sanoaawajNo Comments
६९ वर्षमा नयाँ पार्टी खोल्दै माधव नेपाल
अन्तर्राष्ट्रिय, आर्थिक, खेलकुद, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट, ब्यापार, मनोरञ्जन, राजनीति, लेख /रचना, शिक्षा, समाचार, सेयर बजार, स्वस्थ्य
काठमाडौं, ९ भदौ । एमालेको १५ वर्ष नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपाल आज नयाँ दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । झन्डै पाँच दशक माले हुँदै एमालेमा जीवन बिताएका नेता नेपाल अहिले ६९ वर्षका भए । यो उमेरमा आएर उनले फेरि शून्यबाट नयाँ पार्टी गठन गरेका हुन् । एकपटक मुलुकको नेतृत्व र १५ वर्ष महासचिवको हैसियतमा एमालेको नेतृत्व सम्हालेका माधव नेपाल आजदेखि औपचारिक रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष बन्ने भएका छन् । एमाले बनाउन हिजो उनलाई साथ दिने झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाल अहिले पनि उनकै साथमा छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टी चलाउन नेपाललाई तेस्रो पुस्ताका रामकुमारी झाँक्री, विजय पौडेल, राजेन्द्र राईलगायतको दह्रो साथ र सहयोग रहँदै आएको छ । यिनै नेताहरूको बलमा नेपालले अब एकीकृत समाजवादी पार्टीको रथ हाँक्ने छन् । हिजोसम्म उनलाई साथ र सहयोग गर्ने अमृतकुमार बोहर...